Tranoben'ny Fanjakan'i Liechtenstein, Tranoben'ny Stampa - Vaduz
Eoropa Liechtenstein Vaduz
Adiresy: Städtle 37, FL-9490 Vaduz
Phone: +423 239 68 46
Daty nanorenana: 1930.
Ny Fanjakan'i Liechtenstein dia firenena tena mahagaga, ao amin'ny faritany kely misy tilikambo ( Castle Vaduz, Castle Gutenberg ), trano fahiny, voatahiry ny fombafomba, ary ny nofinofin'ny filatelista - ny tranom-panjakana any Liechtenstein, fanta-daza manerana izao tontolo izao - dia ao anatin'ny lisitr'ireo zava- tsarobidy .
Sambany teto Liechtenstein no nanomboka nanonta sy nivarotra ny taratasim-pandefasana ny 1 Febroary 1912, ary tamin'ny taona 1920 dia nanana ny taratasiny manokana ny fanjakana, alohan'ny nampiasan'izy ireo ny Aostraliana, na dia teo amin'ny taonjato faha-16 aza ny tantaran'ny mailaka amin'ny fanjakana madinika. Herintaona taty aoriana, niditra tao amin'ny tambajotran'i Soisa ny lahatsoratry ny firenena, ary i Liechtenstein dia nitazona ny zony hanonta marika manokana, ankoatra izay ny marika ihany koa dia namidy marika any Soisa sy ny firenena hafa. Niroborobo ny famokarany, ary navoaka tsikelikely ny andiam-balala. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny mari-pamantarana ny fanjakana dia ny kalitao avo lenta sy ny famolavolana ny sary, saingy ny famoahana andianà andiam-pandaharana iray dia efa nisy hatrany ny dika printy. Ny mari-pamantarana dia navoaka ho mora indrindra amin'ny 2 rappas, ary koa lafo vidy amin'ny vidin'ny franc 1 Swiss. Mbola navoaka ihany ny mari-pamantarana na dia nandritra ny Ady Lehibe Faharoa aza. Tsara homarihina fa ny mari-pamantarana printy miaraka amin'ny lohahevitry ny Rosiana: ny marika miaraka amin'i A.V. Suvorov, andianà atody Pakistane Rosiana, andian-tantara "Evgeny Zotov" sy ny hafa.
Mba hananganana fanangonana vintage ary hitahiry ny lova sy ny antontan-taratasim-piraketana tamin'ny 1930, dia nosokafana ny Tranoben'ny Fanjakan'i Liechtenstein, izay antsoina koa hoe Liechtenstein Museum of Stamps. Ary tamin'ny taona 1936 vao tonga ny mpitsidika voalohany ny tranombakoka. Efa tamin'ny andron'ny Desambra 1995 tany amin'ny faritra rehetra tao amin'ny fanjakan'i Liechtenstein no niseho milina fanontam-pirinty fahiny. Amin'izao ny fanampian'izy ireo dia afaka mandoa vola amin'ny taratasy ianao ary mividy ny marika. Ny filatelista dia manangona tsangambato roa avy amin'ny automatique, ary tombo-kase izay misy ny fitaovana manokana tsirairay miaraka amin'ny tandindon'ny fiarahamoniny. Hatreto, ny fivarotana mari-pamantarana dia iray amin'ireo lahatsoratra tena mahasoa indrindra amin'ny tetibolam-panjakana.
Inona no malaza nalaza?
Taorian'ny nanorenana dia niverimberina nanangona ny tranom-pandevenana ny tranom-pandevenana, mandra-pifaneraserana farany tamin'ny tranon'ny "Englishman" tamin'ny taona 2002 tao afovoan-tanànan'i Vaduz, akaikin'ny Tranom-panjakana, ny Tranom-panjakana an'ny Liechtenstein ary ny Mozean'i Liechtenstein . Ny andian-tsarin'i Liechtenstein dia heverina ho zavakanto madinik'ireo filatelista manerana izao tontolo izao. Isaky ny fanontana vaovao dia alefa any amin'ny tranombakoka ny kopia.
Ao amin'ny trano fanamboaran-tranonkalan'ny tranom-behivavy any Liechtenstein dia azo ampiharina ireo marika manokana sy marika isan-karazany any amin'ny firenen-kafa. Ny tranom-bakoka ihany koa dia mitazona takelaka vita printy, sary sokitra, fanasongadinana ary fitaovana hafa manan-danja momba ny fanompoana ny paositra. Ny mpitsidika, ankoatra ny fanangonana azy, dia hampiseho marika fitsaràna, maro amin'izy ireo no tsy nahatratra ny famotsorana. Azonao atao ny mahita ireo fitaovana sy fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana marika sy mailaka, ireo zavatra taloha toy ny mailaka avy amin'ny vanim-potoana samihafa, ary koa ny endrika sy fitaovana amin'ny fandefasana, sns.
Isan-karazany dia mandamina ny fampisehoana tempo mandritra ny fotoana voafetra ny tranombakoka.
Ahoana ny fandehanana mitsidika ny tranom-bakoka?
Koa satria ny tranom-bakoka dia miorina ao amin'ny foibe ara-kolotsaina ao Vaduz renivohitra kely, dia afaka mandeha am-pandehanana mankany amin'ny tranom-bakoky ny tranombakoka telo ianao, ary mitsidika ny Museum of Ski , izay ahitana tahiry mahaliana izay miresaka momba ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena amin'ny ririnina. Amin'ny ankapobeny, ireo mpizaha tany ao amin'ny faritanin'ny fanjakan'i Liechtenstein dia mihetsika ao anaty taxi na fiara voavoatra. Afaka mankany amin'ny tranom-bakoka mora foana ianao eo amin'ny kôlôretra: 47'08'20.31 ''. sy 9'31'21,87 '' E.
Ny tranombakoka dia misokatra isanandro amin'ny 10:00 hatramin'ny 17:00, manomboka amin'ny 12: 00-13: 00 mikatona amin'ny sakafo antoandro, fidirana maimaim-poana. Ny tranom-bakoka dia tsy miasa ho an'ny Krismasy katolika (24-25 Desambra) sy ny Taom-baovao (31 Desambra-1 Janoary).
Fantatra fa nanomboka tamin'ny taona 1938-1943 ny endriky ny mari-pamantarana dia nosoratan'i Ivan Grigorievich Myasoedov, mpanakanto rosiana avy amin'ny sehatry ny matihanina;
Tamin'ny taona 2011, anarana marika 25 samihafa tamin'ny fampitomboana ny fampisehoana no nanoratana teny an-tampon'ny tanàna ho sary.
Fitsangatsanganana ao Sipra - Ayia Napa
Ny oniversite Perichnik
Volo tapaka - fifantenana sary amin'ny modely modely amin'ity vanim-potoana ity
Karakarao ny gloxinia taorian'ny voninkazo
Inona no azoko omena ho an'ny Taombaovao?
Fango volamena - fampiharana
Fikolokolo ny hoavy
Niaiky i Mariah Carey fa mijaly noho ny korontana bipolar izy
Zaeda eo amin'ny zoron'ny vavany - ny antony sy ny fitsaboana ny karazana cheilitis rehetra
Fitiavana mastopathy - fitsaboana
Mofo mena - 8 hevitra niavaka ho an'ny sakafo tsotra
Inona no asehon'ny tohotra?
Mandamina ny filaminana amin'ny zavatra rehetra
Kitapo fitondra fotsy
Saripikan'i Barbie sary
Ririnina hoditra 2014
Spermogram: endrika maloto
Ny lafarina katsaka dia tsara sa ratsy?
Mangatsiaka eo amin'ny molotra mandritra ny fitondrana vohoka